UFidel Castro kunye noncwadi lwaseCuba | Uncwadi lwangoku
Nge-25 kaNovemba, uFidel Castro wasweleka eneminyaka eyi-90 kwisixeko saseHavana ilawulwa bubukomanisi ukusukela ngo-1959. Ixesha apho isiqithi saseCuba siye savalwa ngokwezoqoqosho yi-United States kwaye abemi bayo baxoxa malunga nenkqubela phambili kwezempilo kunye nemfundo kaCastro kunye nohlobo lwentolongo olwafunyanwa sisiqithi esikhulu kwiCaribbean. Umgaqo-nkqubo oqwalaselwe ikakhulu ngababhali abachasene noCastro abavakalisa umbono wabo wenyani kwezi Iinoveli ezi-5 ezithandwayo zoncwadi lwaseCuba.
1 Inkulungwane yezibane, ngu-Alejo Carpentier
2 Ngaphambi kokuwa kobusuku, nguReinaldo Arenas
3 Wonke umntu uya, nguWendy Guerra
4 Indoda eyayithanda izinja, nguLeonardo Padura
5 Yonke into ayikho, nguZoe Valdés
Inkulungwane yezibane, ngu-Alejo Carpentier
ICuba, isiqithi esinokufundwa
Ngaphandle kokupapashwa ngo-1962 kwaye engathethi ngqo kurhulumente ka-Fidel Castro, I-Century of Lights iphonononga iingcambu eziguqukayo zaseCuba kunye ne-XNUMX yeLatin America nge-antecedent efana inguquko yaseFrance. Kwinoveli, impembelelo yaseYurophu kwiikholoni zeCaribbean ibonakaliswa ngomlinganiswa UVictor Hughes, wezopolitiko waseMarseille owandise umlinganiso wotshintsho kwiAntilles, ukondla umbono oza kubeka isiseko seenguqu kwezopolitiko eCuba ngo-50.
U-Arenas wazalelwa kwi-Cuba yezolimo eyayichaphazeleke kakhulu emva kokunyuka kukaCastro. Wayezinikele kunina, ethanda amadoda, kwaye wazama amatyeli aliqela ukubaleka kwisiqithi esingavumelani nabufanasini. Ubomi bukaReinaldo Arenas babanjwa kwibhayiloji yakhe, Phambi kobumnyama, yapapashwa kwiintsuku ezimbalwa emva kokuzibulala kwakhe eNew York ngo-1990, isixeko awabalekela kuso kwiminyaka elishumi eyadlulayo nalapho wahlaselwa nguGawulayo. Incwadi yahlengahlengiswa kwifilimu ngo-2000 nge UJavier Bardem kwindima yombhali.
Ukukhula nokuhlala eCuba ngumxholo we le noveli apho uGuerra, Ukucinga ngeendibano zocweyo zokubhala zikaGabriel García Márquez ngexesha lotyelelo lwakhe eHavana, Usabela kwi-ego yakhe eguqukileyo, uNieves Guerra, ukusibalisela ibali lobomi bakhe ukusuka kwiminyaka esi-8 ukuya kwengama-20 ubudala. Njengedayari, uGuerra uphonononge iCuba apho ahlala khona exutywe ngurhulumente, ubudlelwane babazali abaphikisanayo okanye ukubhabha kothando lwakudala phantsi kwezithembiso ezaphukileyo. Incwadana, epapashwe ngo-2006, iphumelele iBhaso lokuHlela iBruguera Kwaye yahlengahlengiswa kwi-cinema ngo-2014.
Ummeli obalaseleyo wefowuni ubunyani obungcolileyo NguLeonardo Padura waseCuba, umsebenzi wakhe wamapolisa ujikeleza kumcuphi odumileyo uMario Conde. Nangona kunjalo, ukuba kufuneka sikhethe umsebenzi nguPadura obonisa umbono wakhe wembali yaseCuba, iya kuba yile Ndoda Yayithanda Izinja, inoveli enabalinganiswa bayo ababhali kunye nendoda engaqondakaliyo emxelela imihla yokugqibela kaLeón Trostky kunye nombulali wakhe, uRamón Mercader. Umsebenzi apho iPadura ibonakalisa khona Imbali yangoku yeCuba kunye noloyiso lomntu ngaphezulu kokuwohloka kwamaxabiso oguquko.
Yonke into ayikho, nguZoe Valdés
Kwiphepha lemihla ngemihla akukho nto sifumana uPatria, uhlobo lwaseCuba uBridget Jones ohlekisayo osebenza ngokuchasene neCuba aqala ukuyibona kwelinye icala xa esiya eParis nomyeni wakhe wokuqala. "Apho ndaye ndafumanisa umhlaba, nabo bonke ubuxoki ababesixelele bona" ​​wakha wavuma uValdés, umzukulwana womfazi olwa uCastro kunye nentombi katata ovalelwe iminyaka emihlanu. Inoveli edumileyo ngumbhali osoloko ephawulwa ngokubhala malunga nokuthinjwa nakwincwadi yakhe esifumana kuyo Intsomi Fidel, Yeyona ncwadi yakhe ijolise ngokwembono yezopolitiko.
Ezi Iinoveli ezi-5 zokuqonda ubudlelwane phakathi kukaFidel Castro kunye noncwadi lwaseCuba bajongana nemiba enje ngokuthinjwa, ubuhlwempu okanye ukufuduka, ukubonakaliswa kwelizwe elibonakala ngathi liyaqala ukuvuka. Mhlawumbi kusafuneka silinde kude kube ngulo mhla xa umntu eqala ukubhala ibali malunga nesiqithi esinokuthi sitshintshe emva koko ukusweleka kukaFidel Castro kunye nokusondela eUnited States. Malunga neCuba evulela umhlaba. Ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UFidel Castro kunye noncwadi lwaseCuba